I-Semalt: Izihloko ze-WordPress Izinhlobo Okudingeka Uzazi Ngazo
Ukukhetha i-theme ye-WordPress efanele kungenye yezinqumo ezinzima kakhulu ozolenza kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi. Esinye sezici ezinhle kakhulu zezingqikithi ze-WordPress wukuthi unganikeza ubuchwepheshe obuhle futhi obuqinisiwe kwisayithi lakho futhi awudingi ubuchwepheshe bokuthuthukisa noma ukuklama iwebhusayithi. Izihloko ze-WordPress zishiya umbono omuhle wokuqukethwe kwakho kubafundi futhi zishintsha indlela amakhasi akho ewebhu ahunyushwa ngayo. Izingqikithi zingenza amasayithi noma amabhulogi abukeke ngokuchofoza okulula - buy new mexico driver's license online.
Ngaphandle kokulawula ukubukeka kwesayithi lakho noma ibhulogi, izingqikithi ze-WordPress zidlala indima ebalulekile noma enkulu ku-SEO (injini yokusesha injini). I-SEO yinqubo yokwenza ngcono noma ukuthuthukisa isayithi lakho noma ibhulogi ukuze ihambelane kahle emakhasini wokuphumela enjini (SERPs). I-Google, i-Bing, ne-Yahoo ikhetha amawebhusayithi ngezindikimba ezinhle futhi iwabekele amagama ahlukahlukene. Ungenza imali ngewebhusayithi yakho kalula futhi ungashayela ithrafikhi ephakathi kwamasonto.
U-Oliver King, isazi esihamba phambili se-14 (Semalt , uchaza ukuthi kunezinhlobo ezintathu eziyinhloko zezingxoxo ze-WordPress:
1. Izihloko ze-WordPress Premium:
Izingqikithi ze-WordPress ze-premium zinekhwalithi ephakeme futhi zakhiwe abalobi abangcono noma izinkampani ezinkulu. Kuzodingeka ukhokhe okuthile ukuze ufinyelele lezozingqikithi, amawijethi, amamenyu, nazo zonke izinketho. Izingqikithi zama-premium zisithatha okuthile kusuka ku-$ 50 kuya ku-$ 500 nge-website futhi zinelayisensi..Banikeza izinzuzo ezilandelayo kumawebhusayithi:
Amakhodi aphezulu kakhulu
i-SEO yenziwe lula
Phunyelela izindinganiso ezithuthukisiwe, ezinkulu nakamuva zakwebhu
Izingqungquthela ze-premium zenziwe kahle futhi zenza kahle
Bashintshashintsha kakhulu kunezingqikithi zamahhala futhi banikeza ukusekelwa okugcwele kubasebenzisi
2. Izihloko ze-WordPress zamahhala:
Kuphephile ukuphawula ukuthi kunezinkulungwane zezingqikithi zamahhala ze-WordPress ku-intanethi. Ingxenye engcono kakhulu ukuthi awudingi ukukhokha noma yini ukuze ufinyelele ezihlokweni futhi ungafaka futhi usebenze ngokushesha. Lezi zihloko zisekhompyutheni yetikrini ze-Wordpress futhi ziza ezihlukahlukene ze-shades, imiklamo, kanye nezakhiwo. Enye yezinhlawulo ezinkulu zezingqikithi zamahhala ukuthi angeke ikusize ukuthuthukisa iwebhusayithi yakho ngendlela engcono. Abathuthukisi bezobuchwepheshe bakhethe izindikimba futhi bazenze zitholakale ku-intanethi, kepha kunezinketho ezimbalwa kuphela zokuzuza kuzo.
Njengoba izingqikithi ze-WordPress zinomthelela omkhulu kuwebhusayithi yakho, i-SEO, izinga lokunciphisa, ukusebenza kwalo, nokunciphisa kwebhulogi yakho, kufanele ukhethe izingqikithi zama-premium ezihlokweni zamahhala ze-WordPress. Uma ungenayo imali eyanele yokuthenga izingqungquthela ze-premium, ungazama ama-Twenty Thirteen noma amabili namashumi amabili nambili, okuyizihloko ezimbili ezihamba phambili zamahhala we-WordPress.
3. Izihloko ze-WordPress ngezifiso:
Amathemu we-WordPress ngokwezifiso aziwa kakhulu ngobukeka bawo obuhlukile futhi obuyinkimbinkimbi. Lezi zihloko zidinga ukuba ufinyelele ezitolo ze-intanethi futhi ube nezici zayo ezithile. Izingqikithi zendabuko zenzelwe izingosi ezisebenzayo noma imikhiqizo yabathuthukisi nabaqambi ngokumelene nemali enzima. Banikeza izinketho eziningi nokuguquguquka, kodwa lezo zici zikhawulelwe kubasebenzisi abaye bakhokhela imali yabo.
Enye yezinhlawulo ezinkulu ukuthi izindikimba zendabuko ziyabiza kakhulu, zigijima kusuka ku-$ 600 kuya ku-$ 6,500 kuye ngokuthi unamakhono futhi udumile umklami. Izibonelo ezinhle kakhulu yiNdlu yeRose yenkambiso yenkambiso kanye neHlelo lokuNgeniswa kweNgeniso leNgeniso.